Public Kura | » ‘राम्रो काम र इमान्दारीता नै मेरो विजयको सुनिश्चितता हो’ ‘राम्रो काम र इमान्दारीता नै मेरो विजयको सुनिश्चितता हो’ – Public Kura
‘राम्रो काम र इमान्दारीता नै मेरो विजयको सुनिश्चितता हो’
भद्र तथा सालिन व्यक्तित्व । सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव । परिपक्व उमेर । नम्र स्वभाव । अनि मिजासिलो र सहयोगी व्यवहारको परिचय बनाएका व्यक्तित्व हुन् अब्दुल कलाम खाँ । पहाडीदेखि मधेशी जनताको भावना राम्ररी बुझेका उनी दुबै समुदायका सुखदुःखका गतिला साथी बनेका छन् । आफ्नै व्यापार व्यवसाय गरेर जिवीकोपार्जन गरिरहेका खाँ धेरै सामाजिक संघसंस्थामा व्यवस्थापनको गहन जिम्मेवारी सम्हालेर सफलतापूर्वक संचालन गरेका थिए । जीवनका अधिकांश समय ग्रामीण क्षेत्रका गरिव विपन्न, बञ्चितीकरणमा परेकाहरुको सेवामा खटिएर राम्रो छवी बनाएका थिए । त्यसैकारण उनी गत वर्ष काँग्रेस कपिलवस्तुको जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । ०७४ सालको निर्वाचनमा कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिकाको मेयरमा विजयी उनी यस पटक पनि उम्मेदवार भएका छन् । साविकको सिसवा गाविस अध्यक्षबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका ६७ वर्षे उनी दोस्रो पटक मेयरमा लडेका छन् । प्रस्तुत छ, चुनाबी अभियानका क्रममा जनताको घरदैलोमा व्यस्त रहेका कलामसँग पब्लिक कुराका लागि हनुमान पाण्डेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
तपाइँले आफ्नो यो उम्मेदवारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
म २०४७ सालदेखि नै काँग्रेसको महाधिबेशन र महासमिति सदस्य हुँदै जनताको सेवामा लागेँ । ०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहमा आफ्नो ठाउँमा बहुदलीय व्यवस्थालाई जिताएँ । ०५४ सालमा साबिकको सिसवा गाविस अध्यक्ष भए । जनताका चाहना र समाजको आवश्यकता राम्ररी बुझे । काम गर्दै गए । जनताले मन पराए । त्यसपछि ०७४ मा महाराजगंज नगरपालिका मेयरमा जिताए । जनताका हरेक सुखदुःखमा साथ दिए । राम्रो र उपलब्धीमूलक काम गरे । पार्टीले फेरि जिम्मेवारी दियो । स्वीकारेर अघि बढेको छु । मत माग्दै जनताको घरदैलो गरिरहेको छु । निक्कै उत्साहित छु ।
तपाइँले यसअघि मेयर हुँदा के–के काम गर्नुभयो ?
मैले देख्दा सामान्य लाग्ने तर स्वास्थ्यका दृष्टिले महत्वपूर्ण कामबाट आफ्नो योजना सुरु गरेँ । पुरै नगरपालिकालाई हिलो (किचड) मुक्त बनाए । पिछडिएको नगरका रुपमा रहेको महाराजगंज नगरपालिकाका सबै गाउँमा विद्यालयको पहुँच बढाए । धेरै गाउँलाई आरसीसी ढलानको बाटोले जोडे । नयाँ नगरपालिका भएकाले पूर्वाधार कम थिए । ५ वर्ष पूर्वाधार बनाउन लाग्यो । अब विकासले गति समात्छ । मेरो विकास योजनाको लक्ष्यमा ७५ प्रतिशत काम गर्न सकँे । २५ प्रतिशत काम पूरा गरेर समृद्ध नगर बनाउन फेरि उम्मेदवार भएको हुँ । ६ ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर संचालन भएको छ । ४ वटा एम्बुलेन्स चलिरहेका छन् । २० कठ्ठा जग्गा नगरपालिकाले किनेर १५ बेडको अस्पताल बनाउन ठेक्का भएको छ । विद्यालयका पूर्वाधार बनाएका छौं । शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको विद्यालयमा दरबन्दी थपेका छौं । एउटा वडामा एउटा मावि बनाउने योजना अन्तिम अवस्थामा पुगको छ । सिंचाईका लागि करिब ४ सय वटा बोरिङ गाडेका छौं । महाराजगंजमा ४ करोडमा १४ कोठा भवन बनाएका छौं । त्यहाँ क्याम्पस चलाउँछौं ।
तपाइँका एजेण्डा के–के छन् ?
मेरो मुख्य एजेण्डा भनेको पूर्वाधार विकास र सुशासन कायम गर्ने हो । एक गाउँदेखि अर्को गाउँ कालोपत्रे सडकले जोड्छु । एक घर एक धारा पुर्याउँछु । सुत्केरी र गर्भवति महिलाका लागि एम्बुलेन्स निःशुल्क गर्छु । त्यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षा, अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई, स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नती गर्ने, सडक बिस्तार, कालोपत्रे गर्ने, कृषि र सिंचाईमा पर्याप्त ध्यान, रोजगार, सृजना, क्लिन र ग्रिन सिटीको अवधारणा अघि बढाई योजनाबद्ध ढंगले लाग्ने योजना छ । महिलाहरुलाई स्वरोजगारमूलक सीप र तालिम संचालन गर्छु । कृषकलाई आयमूलक तालिम र युवालाई स्वरोजगार बनाउँछु । कृषिको बजारीकरणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छु ।
कस्तो नगरपालिका बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
लुम्बिनी प्रदेशकै नमुना नगरपालिका बनोस् भन्ने चाहन्छु । तराई मधेशका अन्य स्थानीय तहलाई उत्प्रेरित र सिको गराउने काम गरेर देखाउन चाहन्छु । इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि छ । फेरि नेतृत्व पाए अब्बल बनाएर देखाउँछु । भौतिक प्रगतिसंगै सफा, क्लिन र ग्रिन बनेको देख्न चाहन्छु ।
तपाइँको बिजयीको आधार के हो ?
‘स्वच्छ छवि र मेरो इमान्दारीता मेरो विजयीको पहिलो आधार हो । म ३ दशकदेखि जनताको सेवामा निरन्तर खटिएको छु । सामाजिक काम र विभिन्न संघसंस्थाको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कुसल नेतृत्व गरेँ । म स्वच्छ रहें । सीमादेखि राजमार्गसम्मलाई लक्षित गरि सबैको उत्थान हुने गरी एजेण्डा उठान गरेका छौं । मतदाता हाम्रो कामलाई विश्वास गरेका छन् । हामीलाई जिताउन उहाँहरु आतुर हुनुहुन्छ । हाम्रो जितको आधार भनेको हाम्रो एजेण्डा र हामीलाई विश्वास गर्ने मतदाता हुुन् । मलाई अन्य दलका आस्थावान जनताले पनि मेरो इमान्दारीता र प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गरेका छन् । मेरो इमान्दारीता, पार्टीका सवै कार्यकर्ताको एकता र अन्य पार्टीमा आस्थावान जनताको मप्रतिको सद्भाव नै मेरो बिजयको सुनिश्चितताको बलियो आधार हो ।
तपाइँ आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी कसलाई देख्नुभएको छ ?
मेरो निकटतम प्रतिस्पर्धी कोही छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उम्मेदवार प्रतिद्वन्द्वी भए पनि ठूलो मतान्तरले जित्छु । म बिजयी भएपछि पनि मैले निर्बाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी र नगरपालिकमा क्रियाशील सवै पार्टीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने छु । कुनै भेदभाव र प्रतिशोध राख्दिनँ । सवैसँग सहकार्य गरेर नगरपालिकाका योजना र कार्यक्रम संचालन गर्छु ।